Ms Staveley’s PCP Capital Partners ayaa dalbatay in Newcastle ka iibsato Mr Ashley dhamaadka todobaadkii hore. Tani waxay timid ka dib laba bilood oo wadahadal ah. | Ciyaarside.com
Ms Staveley’s PCP Capital Partners ayaa dalbatay in Newcastle ka iibsato Mr Ashley dhamaadka todobaadkii hore. Tani waxay timid ka dib laba bilood oo wadahadal ah.
Ilo wareedyo ku dhow Newcastle ayaa u sheegay Sky Sports News in wararku ay sheegayaan in dalabkani uu ku haboon yahay £ 300m oo gini.
Lama oga cida habeenimadii isniinta ka damaysay in PCP uu ahaa kan keliya ee lagu kalsoonaan karo ee kooxda, laakiin PCP ayaa rajeyneysa inay ka faa’iideysato Mr Ashley, madaama aysan jirin koox kale oo loo tartamayo marka laga reebo newcastale.
Mike Ashley ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo inuu Newcastle ka iibiyo bisha October ee sandka dame.
Lacagta PCP waa lacag isku mid ah Ms Staveley iyo sayqgeeda waxaa ay ku jiraan maalgelin ku salaysan Bariga Dhexe lkn hada waxaa ay umuuqdaan in usoo jeedan maal gashiga qaarada yurub gaar ahaanan kubada cagta.
PCP-da ayaa la rajeynayaa inay qoondeyn ku yeelato lacagaha kala duwan ee suuqa kala iibsiga ee Rafael Benitez
Wargelinta Ms Staveley ayaa aheyd mid aad u kacsan tan iyo markii ay ka soo qeybgashay kulankii Newcastle ee ay la ciyaareen Liverpool xilli ciyaareedkan.
PCP ayaa dooneysay inay heshiis la gasho kooxda Merseyside ka dhisan milkiilayaasha Mareykanka sannadkii hore, laakiin ugu dambeyntii waxa ay ka careysiisay isku daygoodii ay ku doonayeen inay ku kordhiyaan qiimaha Liverpool.
Mss Staveley waxa ay ahayd orchestrator ee Manchester City oo maalgashi ku sameysay Abu Dhabi 2008dii – ma ahan markii uu Ashley ka iibsaday Newcastle lacag ka badan £ 240m.
Afhayeen u hadlay Ms Staveley ayaa diiday in ay faallo ka bixiyaan Habeenimadii Isniinta, halka afhayeenka Mr Ashley uusan la hadli Karin war baahinta